Home - ISP Myanmar China Desk
တရုတ်-မြန်မာဆက်ဆံရေးကို နားလည်ရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် နောက်ခံအကြောင်းအရာများ၊ ပထဝီနိုင်ငံရေးများ၊ မျက်မှောက်ခေတ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ သုံးသပ်ချက်များကို စုစည်းတင်ပြထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါသည်။
Public Events and Multi-media Reports
RFA Burmese, video news
စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့ တရုတ်ရဲ့လုပ်ရပ် မေးခွန်းထုတ်ခံရ
တရုတ် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဝမ်ယိရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ စစ်ကောင်စီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အန်းဟွေး ပြည်နယ်၊ ဟွမ်းရှမ်မြို့ကို မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ကနေ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့အထိ သုံးရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ကဖိတ်တာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်း Read more...
Council on Foreign Relations, Joshua Kurlantzick, article
When the Myanmar junta first launchedacoup, in February 2021, there was some discussion in the following months of the possibility that China, which had enjoyedaclose relationship Read more...
Asia Cargo news, news
CHINA LAUNCHES RAIL-SEA FREIGHT TRAIN SERVICE TO MYANMAR
China announced that the first outbound international rail-sea freight train from China's Yangtze River to Indo-China Peninsula left Guoyuan Port in southwest China's Chongqing Municipality for Myanmar's Yangon on Read more...
The Irrawaddy, news
တရုတ်ကြေးနီစီမံကိန်းများ မရပ်တန့်လျှင် တိုက်ခိုက်မည်ဟု ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်များကြေညာ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ ကြေးနီစီမံကိန်းများ ပြန်လည်စတင်ရန် ဆောင်ရွက်နေသည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်မဆို တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ၁၆ ခုက ပူးပေါင်း၍ Read more...
The Standard Time Daily, news
နိုင်ငံရေးပါတီများအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု UEC ကို တရုတ်သံအမတ်မေးမြန်း
နစက၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ငါးရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီးက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် Read more...
The Diplomat, Amara Thiha, Article
Nearly 15 months after the military coup in Myanmar, the junta’s relationship with China is warming up, witharecent resumption in diplomatic exchanges, though both sides are keepingalow profile. The China Myanmar Economic Coordinator (CMEC) Read more...